Clamp amin'ny alàlan'ny alitara
Mpitohy tsipika mivantana
Connector splice mandeha ho azy
Fampifandraisana an-tsokosoko voaroaka
Clamp fihantsiana, clamp fampiatoana
Fangejana bandy efa vita amin'ny famonoana farany
Insulator fampiatoana volo
Fitaovana herinaratra hafa
Clamp amin'ny tsipika mafana
Clamp vita amin'ny tsipika aluminium mafana
Wire vy mandeha ho azy
Ny famatorana herinaratra mitahiry angovo dia ireo fantsom-pifandraisana tsy misy enta-mavesatra, ampiasaina matetika amin'ny tsipika fandefasana, tsipika fizarana ary ny rafitra tsipika fizarana, ny fizarana ary mitana andraikitra lehibe amin'ny jumpers.
Azo ampiharina amin'ny tariby alimo, tariby varahina, tariby mitaingina overhead, tariby ACSR, sns., Fa koa ho an'ny tariby varahina varahina, tariby alimina mankany amin'ny tariby aliminioma, tariby varahina ho an'ny conducteur aluminium toy izany.
JBL Copper Parallel groove clamp
Parallel -Groove clamp mitambatra mpampitohy fantsona dia mihatra amin'ny lanja disburdening fifandraisana ny overhead aluminium tariby sy splicing vy tariby. Ny serivisy fantsom-pifandraisana mitambatra BTL dia azo ampifandraisina amin'ny fifandraisana transitional ny varahina azo ampifandraisina amin'ny sampana misy fifandraisana amin'ny faritra samihafa
H karazana mpampitohy tariby
Ny karazana clamp wedge dia mety amin'ny fanohizana na ny alàlan'ny tariby tariby mitazona alim-bolo vita amin'ny overhead na tariby vita amin'ny vy, ny fonosana insulation ary ny clamp dia ampiasaina miaraka. Ho fiarovana fiarovana.
Clamp amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alimo APG Aluminium
Misy tranga maromaro izay anerena anao hametraka conducteur mifanitsy. Ny iray amin'izy ireo dia rehefa te-hametraka conducteur faharoa amin'ny loop mihidy ianao. Ny fampiharana toy izany dia mitaky anao hividy clamp grove mifanila.
Ny clamp amin'ny làlan-kazo mifanila dia misy singa roa, ny tapany ambony ary ny ilany ambany. Izy ireo dia natambatra mba hampiasana ny hery fametahana amin'ny tsipika fandefasana. Mety ho tariby mandeha amin'ny herinaratra na tariby fifandraisan-davitra izany.
Ny clamp amin'ny alàlan'ny alitara dia vita amin'ny alim-be mavesatra izay matanjaka sy mahatohitra ny endrika simika simika sy simika. Ny metaly alimina dia manome ihany koa ny hery clamping be loatra izay takiana rehefa mikambana amin'ny conducteur mifanila. Izy io koa dia manome fanoherana ny taratra UV.
Ireo mpitaingin-tsokosoko mifanitsy dia manamboatra endrika 'mifanaraka tsara'. Io dia ahafahana mametaka azy tsara ary manolotra ny fanampiana tadiavina. Ny endrika dia mamela ny clamp hanohana ny halehiben'ny fitarihana. Ny làlan-drivotra mifanitsy dia manome sehatra hipetrahan'ny mpitantana.
CAPG Bimetal Parcourbe clamp
Ny mpampitohy Groove dia ampiasaina amin'ny fifandraisana tsy misy fiterahana sy ny offset ny tariby mihantona aluminium sy tariby mihantona aluminium. Ampiasaina miaraka amin'ny fonony insulate izy io mba hiarovana sy hanamafisana ny tariby
Ny clamp amin'ny alàlan'ny alàlan'ny parallères dia ampiasaina amin'ny fandefasana ankehitriny eo anelanelan'ny mpampitohy mifampitohy. Ankoatr'ity faritra lehibe ampiasain'ny rindrambaiko mifono rindrambaiko ity dia ampiasaina amin'ny tadivavarana fiarovana ary noho izany dia tsy maintsy manome tanjaka mitazona mekanika sahaza izy ireo.
Raha mpampifandray vita amin'ny akora samihafa no ampifandraisina dia azo atao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana bimetal aluminium varahina PG clamp. Ao amin'ny clamp PG bimetal, ny vatany roa dia vita amin'ny firaka alimina mahery, ary ho fanamafisana ny fitarihana varahina dia vita amin'ny alimo alimo ny alika iray ary ampidinina ravina bimetallika sandoka mafana. Ny vy dia vita amin'ny vy mahery (8.8).
Ny orinasa dia nandany ny fanamarinana ny kalitao, ny tontolo iainana sy ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana, ary nahazo laza tsara teo amin'ny orinasa mitovy amin'ny vokatra avo lenta, vidiny mirary ary laza tsara.
Adiresy: No.268, Wei 11 Road, faritra fampandrosoana ara-toekarena Yueqing, Tanàna Yueqing, Faritanin'i Zhejiang, Sina
Telefaona: + 86-15858513191
Fax: + 86-0577-62698355
© Copyright -2020 - 2021 Fanohanana ara-teknika: